थकित बारहरू र क्लबहरू र प्रतिस्पर्धा संग अन्य मान्छे को लागि महिला । कहाँ जान्न चाहन्छु पूरा गर्न बालिका जहाँ आफ्नो प्रतियोगिता.
हेर, मानिस, सबैभन्दा मान्छे गरिरहेका छन् यो डेटिङ कुरा सबै गलत हो । कसैले एक पटक मलाई भन्नुभयो, तपाईं चाहन्थे भने बेच्न, एक पुस्तक मुश्किल ठाँउ गर्न यो बेच्न एक पुस्तक पसल । किन । किनभने तपाईं संग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् सबै अन्य पुस्तकहरू । म भने मलाई थाहा छैन भन्ने साँचो हो, तर यो निश्चित साँचो यो डेटिङ गर्न आउँदा. तपाईं जान भने गर्न बार, क्लब वा अनलाइन खोज त्यसपछि तपाईं संग प्रतिस्पर्धा गर्दै छन्, हरेक अन्य मान्छे छन् । सुन्न, सबैभन्दा मान्छे के बन्दूक दृष्टिकोण डेटिङ गर्न र फलस्वरूप, तिनीहरू जाँदै महिलाहरु को लागि छ कि, तिनीहरूले छैनन् पनि संगत संग. मलाई बाहिर सुन्न भने, तपाईं सोध्न कुनै पनि सफल व्यापार गर्न कसरी, तिनीहरूले ग्राहकहरु पाउन, तिनीहरूले यो एक धेरै विशिष्ट तरिका छ, त्यसैले तिनीहरू सक्छन् लक्ष्य डेमोग्राफिक छ कि सबै भन्दा अधिक संभावना गर्न संगत र खरीद गर्न चाहन्छु आफ्नो उत्पादन । डेटिङ सही नै बाटो । र तपाईं के भने, यो तपाईं सुरु छौँ बैठक र डेटिङ महिला तपाईं वास्तवमा चाहनुहुन्छ. त्यसपछि तपाईं हुन तयार गर्न दृष्टिकोण एक केटी र स्पार्क कि आकर्षण छ । के हो त आफ्नो लक्ष्य डेमोग्राफिक छ । के तपाईं आवश्यक एक स्पष्ट चित्र छ के गर्न रूपमा प्रकार महिला गर्न चाहनुहुन्छ मिति? उदाहरणका लागि, तपाईं शायद हुँदैन लागि देख जान महिला बारहरू र क्लबहरू छैन छौं भने तपाईं पनि मा पार्टी बालिका । समझ को गुणहरू आफ्नो आदर्श केटी तपाईं पाउन मदत गर्नेछ जहाँ त्यो बाहिर झुन्डियो. बताए भइरहेको, निम्न स्थानहरुमा अपिल हुनेछ तपाईं अरूलाई छैन हुनेछ. तर पहिले म तपाईं दिन को सूची को मेरो मनपर्ने ठाउँमा, तपाईं जान्नु आवश्यक छ: यो एक ठूलो कारक मदत गर्न तपाईं पूरा बढी महिला अनुकूलन छ. आफ्नो जीवन शैली । बस्न छिमेक भरिएको महिला आफ्नो पूरा गर्न । यो बाटो, तपाईं तिनीहरूलाई देख्न अधिक अक्सर आफ्नो दैनिक जीवन छ । यो आमूल सुधार महिलाको संख्या तपाईं पूरा । विशेष गरी भने, राम्रो तपाईं प्रेम पुष्ट र लचिलो बालिका र रुचि छैन कसले. सामान्यतया, यी बालिका साँच्चै मा स्वास्थ्य, प्रकृति, ऊर्जा जस्तै काम, चक्र, खाली गराई र विभिन्न प्रकारका आत्म-विकास । जाने ठाउँ कि तपाईं आनन्द को सट्टा जा कि व्यक्तिहरूलाई तपाईं रुचि छैन बस किनभने त्यहाँ छन्, अधिक प्यारा बालिका । किनभने तपाईं, राम्रो के हुनेछ भने तपाईं आनन्दित छन्. एक कुकुर । त्यसपछि यहाँ जाने छ । पुग्न उनको धेरै सजिलो हुनेछ किनकी तपाईं तुरुन्तै साधारण मा केहि छ. मेरो मनपर्ने शुरूआत लागि एक कुकुर संग एक केटी म मिल्यो कि मेरो असल मित्र विंस केल्भिन»अरे के एक प्यारा मालिक तपाईं।»के तपाईं किन्न र किराना सामान छ । खैर, शायद त्यो पनि गर्दछ, विशेष गरी भने त्यो स्वास्थ्य सजग छ । प्रयास पुरा खाद्य पदार्थ. मेरो अनुभव मा, स्वास्थ्य खाना स्टोर छ धेरै बालिका भन्दा वा. के तपाईं जस्तै पढ्न वा काम मा आफ्नो ल्याप्टप? खैर, गर्न टाउको, एक लोकप्रिय कफी शप छ । केही कारण लागि, तातो महिला प्रेम. यसको एस प्रकारको एक प्रवृत्ति छ । बाहिर झुन्डियो एक जोडी घण्टा बस्न, जहाँ सबै मानिसहरू द्वारा पारित, र सम्म प्रतीक्षा तपाईं देख्न एक महिला आफ्नो पूरा गर्न । छ भने त्यो व्यस्त पढाइ वा काम सुनिश्चित गर्न स्वीकार के त्यो गरिरहेको छ, अरे, म तिमीलाई देख्न पुन पढाइ । तर म आउन चाहन्थे भन्दा साँच्चै छिटो र भन्न. तातो महिला सामान्यतया बाहिर काम त पाउन जिम जहाँ सबै बालिका धाउन । मनमा राख्न जिम मा तिनीहरूले छन् चिट च्याट त्यसैले राख्न यो छोटो र मीठो छ । प्रयोग हाम्रो सरल प्रशंसा, योग्य, बन्द प्रक्रिया बनाउन उनको गहिरो आकर्षित गर्न तपाईं अन्तर्गत मा मिनेट, सबैभन्दा कुकिंग वर्ग हो भरिएको मात्र महिला । सबै भन्दा राम्रो-मामला परिदृश्य छ जब महिला मानिसहरू किनभने तिनीहरूले भन्दा लड्न. तपाईं संगीत प्रेम भने, त्यसपछि यो आफ्नो स्थान छ । ठूलो संगीत उत्सव को टन छ महिला र तिनीहरू सबै देख गर्न मजा छ.
जीत केटी भन्दा मा ध्यान, भएको मजा
यदि तपाईं जस्तै एक केटी कपडे राम्रो, त्यसपछि तपाईं पक्का हुन सक्छौं, त्यो मल. सबै भन्दा राम्रो समय सामान्यतया शनिवार बिहान छ । मलाई थाहा छ को एक कि केटी भन्नुभयो, म चाहन्छु साँच्चै प्रेम एक मान्छे को दृष्टिकोण मलाई बेला म चलिरहेको छु. यो एक आश्चर्य थियो मलाई । तर हो, भने त्यो चलाउन रुचि, त्यो पनि चाहन्छु पूरा गर्न रुचि कि एक मान्छे रुचि चलान । त्यसैले, तपाईं धावक के गर्न के थाहा घाम समुद्र तट संग लोड छन् सुन्दर महिला मा बिकनी रही आफ्नो तन मा । यो कुरा छ भनेर सबैभन्दा मान्छे हो, बाटो पनि डराउनुहुन्छ गर्न दृष्टिकोण मा एक केटी एक — द्वारा यति पुग्न उनको, तपाईं बाहिर खडा. कलेज मा पनि भने, तपाईं आफ्नो वा यो मेरो मनपर्ने ठाँउ पूरा गर्न महिला । किनभने यो एक लक्षित धनी वातावरण को पूर्ण युवा शिक्षित महिला. त्यसैले बस यात्रा आफ्नो स्थानीय विश्वविद्यालय र एक पैदल लागि जाने वा यात्रा मा एक क्याफे मा परिसर र माथि प्रहार कुराकानी.
अब तपाईं हुन सक्छ कि डर
सबै को पहिलो, तिनीहरूले लगभग कहिल्यै सोध्न. यदि त्यो गर्छ, बस उनको बताउन तपाईं लिइरहेका छन्, एक पैदल वा तपाईं जस्तै कफी पसल वा तपाईं एक मित्र भनेर त्यहाँ जान्छ, यदि यो साँचो हो । वा इमानदार हुन र भन्न बैठक मा महिला बारहरू र क्लबहरू छन् किनभने तिनीहरूले पनि मातेको र लापरवाहीसंग छ । तपाईं मा छक्क हुन चाहन्छु कसरी धेरै महिलाहरु प्रेम भन्ने जवाफ । समूह वा संगठन तपाईं आनन्द भनेर यस्तो पैदल यात्रा वा रक्सी समूह । तपाईं पाउन छौँ, अन्य महिला संग नै सोख, त तपाईं तुरुन्त जडान र बारेमा कुरा गर्न केहि छ । तपाईं पनि लिन सेमिनार वा वर्ग कि. म फेला छु कि महिला को एक धेरै प्रेम गर्न धाउन व्यक्तिगत विकास कार्यशाला जस्तै साई वा करोडपति मन गहन र महिला सामान्यतया. तर के हो भने तपाईं साँच्चै केहि मा छैन साँच्चै सबै केटी अनुकूल यस्तो भिडियो खेल वा बन्दूकहरु शूटिंग वा एमएमए लडाई । अब पनि तपाईं छैनन् भने आफ्नो मनपर्ने वातावरण, उदाहरणका लागि, तपाईं बस हेर्न एक सुन्दर महिला सडक तल हिँडिरहेका, तपाईं पक्का दृष्टिकोण उनको तापनि किनभने तपाईं के कुनै विचार छ उनको चासो हो भने वा त्यो संगत छ. सबै फाइदा लिन मौका छ । म यो सृष्टि मुक्त कुराकानी धोखा पाना जहाँ म बिग्रनु ठ्याक्कै के भन्न पछि»नमस्ते»गर्न उनको बनाउन चाहनुहुन्छ. तपाईं चाहनुहुन्छ भने र हामीलाई तपाईं कसरी देखाउन पूरा गर्न महिला व्यक्तिगत, बाहिर जाँच गर्न यहाँ क्लिक प्रत्यक्ष तालिका
← जहाँ संग प्राप्त गर्न एक असल मानिस जीवन को लागि ।
इटालियन महिला पूरा इटालियन महिला बेमेल →